Onye njem nlegharị anya ọhụrụ Tollman meriri n'ọrịa kansa na 91
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » Onye njem nlegharị anya ọhụrụ Tollman meriri n'ọrịa kansa na 91
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • trending Ugbu a
Onye ọhụụ ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke ụwa, onye ọchụnta ego, na onye na-ahụ maka ọdịmma Stanley S. Tollman, onye nchoputa na onye isi oche nke The Travel Corporation (TTC), ndị otu mba ofesi na-eme nke ọma nwere ihe karịrị ụdị nrite mmeri iri anọ gụnyere Trafalgar, Insight Vacations, Contiki Holidays, Red Carnation Hotels, na Uniworld Boutique River Cruises, na onye ọsụ ụzọ nke njem njem na-adigide site na TreadRight Foundation na-anaghị akwụ ụgwọ, anwụọla n'ọgụ kansa. Ọ dị afọ 40.
Ememe dịka onye nrụpụta ụlọ ọrụ njem ọgbara ọhụrụ, Tollman mere ka ọtụtụ nde mmadụ nwee ike ịchọpụta ụwa site na Pọtụfoliyo nke ụdị njem.
Enwere ike icheta ya nke ọma dịka nna ochie hụrụ n'anya na onye nlekọta nke narị afọ gara aga, nke ezinụlọ nwere ma na-azụ ahịa.
Taa TTC nwere ihe karịrị ndị ọrụ 10,000, na -ebuga ndị ọbịa gafee mba 70 n'ụwa niile ile ọbịa na -enweghị atụ.
Nwa nke ndị Juu Lithuania kwabatara bụ ndị gbanahụrụ mgbochi Semitism na-eyi ndụ egwu na Czarist Russia, Ọnye na -bụ Stanley Tollman? amụrụ na obere obodo ịkụ azụ na South Africa nke Paternoster na Western Cape ebe nne na nna ya na -arụ obere ụlọ nkwari akụ nwere ụlọ mposi n'èzí yana ebe nwata Tollman na -agagharị ụkwụ efu mgbe ọ na -amị ọkụ na ụkpụrụ omume nke ezinụlọ raara nye ile ọbịa.
Nna ya Solomon Tollman kpọrọ usoro nlekọta ndị ahịa nwere ọmịiko nke 'ọrụ na -akwali' na ụzọ a, yana nchụso na -enweghị nkwụsị, ga -abụ akara ngosi nke ọrụ ndụ Stanley Tollman, nkuzi na amamihe na -adịgide adịgide nke ọ nọgidere na -ele ọbịa kemgbe ọtụtụ iri afọ. ọrụ na ịkụnye n'ime ọgbọ nke Tollmans nke na -aga n'ihu na -eso nzọụkwụ ya.
Nwa nke Afrịka na -eleba anya na ụwa
Na 1954, Stanley Tollman lụrụ Beatrice Lurie, na -amalite akụkọ ịhụnanya na mmekorita. Na -ekerịta agụụ maka ile ọbịa pụrụ iche, di na nwunye na -eto eto jiri ego agbamakwụkwọ ha zụta ihe mbụ ha - Nugget Hotel na Johannesburg.
Tollman rụrụ ọrụ ike na -agwụ, site n'ịchụso izu oke ya na agụụ iji nwee mmetụta na ya South Africa na, ọ bụrụ na ọ ga -ekwe omume, ụwa. Ohere ahụ bịara na 1955 site na itinye ego nke abụọ nke Tollman, The Hyde Park Hotel, ụlọ nkwari akụ na-akụda ala na South Africa nke guzobere aha Tollman dị ka akara nke kacha mma wee kpochapụ onye na-eto eto na-eto eto ka ọ bụrụ onye a ma ama.
Na Hyde Park, Stanley na Bea rụrụ ọrụ na mmekorita chiri anya, ebe Stanley na -ahụ maka ihu ụlọ ebe Bea na -arụ ọrụ n'azụ ihe nkiri, wee bụrụ naanị onye isi isi nwanyị na South Africa n'oge ahụ. Echiche ha maka ụlọ iri nri mbinye aka nke ụlọ nkwari akụ ahụ, ụlọ oriri na ọnyụ Coloụ Colony kọwapụtara ịdị ebube ya ozugbo wee bụrụ ihe na -atọ ụtọ. Tollman gara ụwa iji weta mmemme cabaret mba ụwa a na -eme eme ebe a, na -ebuli ngosipụta South Africa na ndị na -ese mba ụwa n'ịgba egwu na egwu. Ọ bụ nke izizi nabata ndị omenkà ama ama na ndị ama ama dịka Marlene Dietrich na Maurice Chevalier na ndị ọrụ ihe nkiri - gụnyere ihe nkiri akụkọ ihe mere eme nke Stanley Baker “Zulu” nke Michael Caine kpara - na South Africa na 1950 na 60s.
Aha Tollman maka ịdị mma tolitere site na iwebata Tollman Towers, kpakpando ise mbụ nke South Africa, ụlọ nkwari akụ niile, sochiri ntinye aka mbụ n'ime ụlọ ọrụ njem site n'ịzụrụ Trafalgar Tours na 1969. Tollman na-eleru anya maka arụmọrụ na ụzọ ọhụrụ. ime njem imikpu na-atụgharị obere ụlọ ọrụ njem ọhụrụ ahụ ka ọ bụrụ otu n'ime ụdị njem njem zuru ụwa ọnụ nke na-enweta ihe nrite karịrị 80 ruo taa. Ọ bụghị naanị na Trafalgar gbasapụrụ ikike Tollman karịrị ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, kamakwa n'ahịa njem ụwa niile, na -emeghe ụzọ maka ịmepụta The Travel Corporation dị ka ọ dị taa.
N'ịtụgharị uche na Tollman dị ka okenye ụwa na onye dịkọrọ ndụ, Sir Geoffrey Kent, Onye guzobere, Onye isi oche na onye isi ụlọ ọrụ njem okomoko Abercrombie & Kent kwuru:
Dea Adria Mallin ekwu, sị:
November 18, 2021 na 11: 30
Ụtụ Linda Hohnholz nyere Stanley Tollman nwụrụ anwụ ugbu a mere ka ọ dị ndụ! Kedu ihe mmadụ pụrụiche. Kedu ihe nraranye maka ịdị mma, ọmịiko, na-anabata mmadụ niile mgbe ndị ọzọ na-ekewa ma na-emeri maka mmụba nke onwe ha, yana ihe ntinye aka na ụlọ ọrụ njem maka imewanyewanye ikike ya, maka nzube nke ịkekọrịta akụ nke okwu ahụ, na-echekwa ha maka ọdịnihu. Ọgbọ, na ịkwalite ahụmịhe njem maka ọtụtụ nde mmadụ. Daalụ, Linda. Daalụ, Stanley Tollman.